Balahlwe ngelakubo kucwila izizumbulu zabo "ebhanoyini" - Ilanga News
Home Izindaba Balahlwe ngelakubo kucwila izizumbulu zabo “ebhanoyini”
Omunye ubengene ngo-R20 000 awuboleke kumashonisa
BALAHLWE ngelakubo uNkz Mbali Phuthini noNkz Fezile Ngubane kucwila izimali zabo “ebhanoyini” eliphahlazekile. bafike kulenga ingidi emahhovisi “ebhanoyi” eliphahlazeke nezimali zabo eMnambithi.
SIPHENDUKE samuncu isimo, basala beqhatha usizi abantu emuva kokuvalwa kwenkampani esolwa ngokuba “yibhanoyi” (pyramid scheme) eMnambithi, kwacwila izizumbulu zemali abebeyifakile.
UNkz Mbali Phuthini waseModekloof, noNkz Fezile Ngubane waseZakheni kwa-E, abayingxenye yenqwaba yabantu abasale bencela izithupha, bakhale ngokulahlwa ngelakubo ngokuphahlazeka kwaleli “bhanoyi” elibizwa ngokuthi yiForex Trading.
Kubikwa ukuthi abantu bebehehwa ngokuthi uma befaka isamba esithile kuleli bhanoyi, izobuya isiphindeke kabili emuva kwezinsuku ezinhlanu, nebala abantu bathutheleka khona.
NgoLwesithathu ekuseni kuleli sonto, bathuke boma bethola ihhovisi leForex Trading lilenga ingidi, kukhala ibhungane.
Bekhuluma neLANGA Lange-Sonto, uNkz Phuthini noNkz Ngubane bathi kube yishwa okubehlele ngoba ngoLwesibili bafike kuvuliwe kuleli hhovisi elisenkabeni yedolobha eMnambithi, futhi kubukeka yonke into iqhubeka ngohlelo.
“Ngifikile ngoLwesibili, ngathola u-R12 000, ngaphinde ngawubuyisela wonke ngenhloso yokuthi ngesonto elizayo ngiyithole isiphindekile, kanti angibuzanga elangeni,” kukhala uNkz Phuthini.
Uthe “ukuphahlazeka” kwaleli “bhanoyi” kumshiye esenkingeni yesikweletu njengoba imali abeyifakile eyiboleke kumngani wakhe nakudadewabo.
“Ngiyazisola ngoba ukube ngithathe lo R12 000 ngabe angikhali ngoba bengizobe ngibuyelwe yimali engingene ngayo nenzuzo ngaphezulu,” kukhala uNkz Phuthini oveze ukuthi akasebenzi, ubesethembele kule mali.
Uthi akaqali ukwehlelwa wumshophi wokucwilelwa yimali “ebhanoyini” njengoba nangonyaka owedlule kwenzeka okufanayo ngesikhathi engene kwelinye elalibizwa ngoSgumza.
“KwaSgumza ngangingene ngemali engaphunyelwa yona ngesikhathi ngiyeka emsebenzini engu R14 000, ngagileka esifanayo,” kusho yena. Uthi ubezitshela ukuthi leli “bhanoyi” lakamuva lisazohlala kuze kuphele inyanga njengoba amaningi ejwayele ukubheka abantu abahola ngomhla ka-15 nokuphela kwenyanga ngaphambi kokuba anyamalale.
UNkk Ngubane yena uthi ubesewutholile uR8000 kodwa wawuphindisela ngoba efuna ukuwuthola usuphindeke kabili, kanti uzolahlwa ngelakubo. Uthi ubeqala ukujoyina ibhanoyi kanti usebenzise imali yakhe abezibekele yona.
“Ngingene ngo-R4000 (ngesonto eledlule) ngoLwesibili ngayithola isiwu-R8000. Ngiphinde ngawufaka wonke lo R8000 kanti isizocwila imali yami,” kusho yena ebalisa ngokuthi akazi ukuthi uzokwenzenjani njengoba eselahlekelwe yile mali.
Baningi nabanye abakhala esifanayo ngaleli “bhanoyi” okuthiwa lithathe amasonto amathathu kuphela ngaphambi kokuphahlazeka.
ILANGA LangeSonto lithole ukuthi kwabebelijoyinile kubalwa amaphoyisa endawo, abahlengikazi nezinye izisebenzi zikahulumeni.
Omunye wesifazane ocele ukungadalulwa igama uthe yena ungene ngo-R20 000 abewuboleke kumashonisa kanti kuyimanje akazi uzothathani ahlanganise nani njengoba esehlelwe yilo mshophi.
Bechaza ngendlela abebefaka ngayo imali kuleli “bhanoyi” bathi bebefika kuleli hhovisi abeligadwe ngonogada abebehlome beyizingovolo bagcwalise amapheshana bese benikeza abesifazane abebeqashiwe imali esandleni.
Ngemuva kwalokhu bebenikezwa amarisidi ashoyo ukuthi umuntu ufake malini, futhi uzothola malini.
Okukholakala ukuthi ubengumnikazi waleli “bhanoyi” kuthiwa ubegadwa ngabaphethe izibhamu kanti ILANGA LangeSonto alikwazanga ukuxhumana naye njengoba abebefaka imali bengenayo imininingwane yakhe.
Ophethe ezokuxhumana kumasipala wendawo i-Alfred Duma, uMnu Siyabonga Maphalala uthe bewumasipala bayayenza imikhankaso yokuqwashisa imiphakathi ngamabhanoyi kodwa kuyacaca ukuthi abantu abakuthatheli phezulu ababaqwashisa ngakho.
Uthe kwesinye isikhathi kunzima ukuqwashisa abantu ngezimali zabo ngoba benza lokhu abakuthandayo ngendlela yabo.
Uveze ukuthi bewumasipala bake bayivala le Forex Trading phambilini, isasebenzela kwelinye ibhilidi kodwa yavumbuka kwelinye futhi ibhilidi. Unxuse umphakathi ukuba uqaphele, ungaluthwa ngabantu abathembisa izulu nomhlaba.
Ayiphumelelanga imizamo yephephandaba yokuxhumana nabalawuli babahlinzeki bezezimali, iFinancial Sector Conduct Authority (FSCA).
Izisulu ezikhulume neLANGA LangeSonto ziveze ukuthi azinamdlandla wokuvula amacala. UColonel Thembeka Mbele, okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uthe akukho abangakusho bona njengoba kungekho macala avuliwe. *Bheka olunye udaba nasekhasini 11
Previous article‘Ubulale inkosikazi inqaba kudayiswe umuzi’
Next articleKundize amadilozi bebhikishela “umalugaju”